सफल हुने चाहना कसरी पूरा गर्ने? सेयर बजारमा यि विशेष कुरामामा ध्यान दिनुहोस् । – OnlinePahar
२८ माघ २०७७, बुधबार १०:३२ Basanta Khanal	0 Comments	share market
सबै मानिसहरु पैसा कमाउन वा धनी बन्न चाहन्छन् । तर केहीले मात्र त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सकेका छन् । सत्य यो हो कि हामीलाई धनी हुनबाट रोक्नु भनेको सोचको भिन्नता हो । एक रिपोर्ट अनुसार तपाईंको सोचाईले तपाईं धनी हुनुहुनेछ वा सामान्य जीवन बिताउन बाध्य हुनुपर्दछ भनेर देखाएको छ । केही खराब बानीले तपाईंको पैसालाई ओझेलमा पार्न सक्छ । यसैगरी, केही खास बानीहरूले तपाईंलाई धनी बन्न मद्दत गर्दछ । स्वयं निर्मित करोडपति स्टीभ सीबोल्डका अनुसार प्रत्येक व्यक्तिसँग पैसा कमाउने र धनी बन्ने क्षमता हुन्छ । यद्यपि, प्रश्न के हो भने तपाईं धनी हुन चाहनु हुन्छ कि चाहनु हुँदैन ? स्टिभका अनुसार केही बानीहरू छन् जसले तपाईंलाई सफल हुन दिँदैन । यदि यो परिवर्तन गर्नुभयो भने धनी बन्ने बाटो खुल्नेछ । हामीले केही बानीहरुको बारेमा छलफल गरेका छौं । यी बानीहरु सुधारेमा धनी बन्न सक्नुहुनेछ ।
१. हाम्रो बानीलाई विशेष ध्यान राख्ने : सबैभन्दा पहिले तपाईंले आफ्नो बानी सुधार्न आवश्यक छ । तपाईंको बानीले तपाईंलाई महान बनाउँछ । अधिक बचत गर्ने अनि कम खर्च गर्ने र अनावश्यक ऋण नलिने बानी राम्रो हो । आर्थिक रूपमा शिक्षित व्यक्तिहरू पनि धेरै पटक खराब बानीको पासोमा पर्दछन् । जसले गर्दा वित्तीय अवस्थामा नकारात्मक असर पर्छ ।
२. सेयर बजारमा लगानी गर्दा यी कुराहरुमा पर्याप्त अनुसन्धान गर्ने : सेयर बजारमा उतारचढावहरु आइरहन्छन् । बजारमा बुल र बियर रनहरु चलिरहन्छन् । तर लगानीकर्ताले भने बजार घट्दा होस् वा बढ्दा, कुन र कस्ता कम्पनीमा लगानी गर्ने अनि कसरी गर्ने भन्ने आँकलन गर्न सक्नुपर्छ । जसका लागि पर्याप्तमात्रामा अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक पर्दछ । अनुसन्धानबिना सेयरमा लगानी गर्नाले तपाईंलाई क्षति हुन पनि सक्छ । लगानीकर्ताहरु प्रायः सेयर बजारबाट छिटो धनी बन्ने लोभमा आफ्नो पैसा डुबाउँछन् । जसको मुख्य कारण अनुसन्धान नगर्नु नै हो । लगानी गर्ने कम्पनीको विगतको अवस्था, वर्तमानमा गरेको प्रगति अनि भविष्यको योजना पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ । क्षणिक लाभहानि भन्दा पनि लामो समयसम्म कपाउन्डिङ लाभ दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ । कम्पनीको प्रमुख वित्तीय सूचकहरु कस्ता छन् ? उक्त सेयर धितो राखेर ऋण पाइन्छ कि पाईंदैन भन्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । केही गरी बजार घटिहाल्यो भने त्यस कम्पनीले दिने लाभांशबाट बैंक ब्याज तिर्न पुग्छ कि पुग्दैन भन्नेतर्फ निकै चनाखो हुनुपर्छ । लगानी गरिएको कम्पनी ग्रोथ ओरियन्टेड हो कि होइन ? इन्डस्ट्री एभरेज रिर्टन कस्तो छ लगायत पक्षमा निकै चनाखो भएर हेर्नुपर्छ ।
३. आपतकालका लागि बचत गर्ने : तपाईंको दैनिक खर्च लगातार बढिरहेको छ । धेरै चीजहरू जुन पहिला विलासी थिए ती अब आवश्यकता बनेका छन् । यस्तो, अवस्थामा आपतकालीन कोषमा मासिकरुपमा रकम राख्नुपर्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ । यसले आर्थिक संकटको स्थितिमा तपाईंलाई गुजारा गर्न सहयोग पुर्याउँछ । तपाईं ऋण लिनबाट बच्न पनि हुनुहुन्छ । यदि तपाईंसँग आपतकालीन कोष छैन भने, तपाईंलाई कहिलेकाहीँ धेरै समस्याहरूबाट गुज्रिनुपर्ने हुनसक्छ ।
>४. तत्काल धनी बन्ने सपनामा काम नबिगार्ने : विभिन्न अध्ययनहरुका अनुसार नेपालमा करिब ९०% स्टार्ट अप लक्ष्यमा पुग्नु अघि बन्द हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा तपाईं पनि आफ्नो काम सुरू गर्न चाहनुहुन्छ भने धेरै अनुसन्धान गरेर मात्र अगाडि बढ्नुहोस् । साथी वा आफन्तको सल्लाहमा यस्तो योजनामा लगानी नगर्नुहोस् । धेरै आकर्षक रिटर्न वा चाँडै धनी हुने योजनाबाट टाढा रहनुहोस् ।
५. अनावश्यक किनमेल बन्द गर्ने : यदि तपाईंले आवश्यकता भन्दा बढी सपिंङ गर्नुभयो भने पनि कहिल्यै धनी बन्न सक्नुहुन्न । स्वयं निर्मित करोडपति ग्रान्ट कार्दोन भन्छन्, ‘मैले व्यापार र लगानीबाट आर्जन नगरेसम्म मेरो पहिलो घडि तथा लग्जरी कार किनेको थिइन् ।“ करोडपति भए पनि, म अझै टोयोटा क्याम्रीमा सवारी गर्छु ।
६. अरुको पछि लागिरहने बानी छ भने त्याग्ने: यदि तपाईं सफल हुन चाहनुहुन्छ भने अरुको पछि नलाग्नुहोस् । अरुबाट सिक्नुहोस तर सरासर कपी नगर्नुहोस् । अरुको सपनाको पछि लाग्ने धेरैले गल्ती गर्छन् । ५ वर्षमा अनुसन्धान गरिसकेपछि थोमस सी कार्लेले भने, “धेरै व्यक्तिले अरूको सपनाको पछि लाग्ने गल्ती गर्छन् ।” जब तपाईं अरूको सपनाहरुमा जीउन थाल्नुहुन्छ, तपाईंले रोज्नु भएको पेशाबाट खुशी हुनुहुन्न, उनले थपे । यदि तपाईं अरूसँग बिनायोजना प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ भने तपाईं कहिल्यै पनि सफल हुन सक्नुहुन्न् ।
७. चुनौतीहरुलाई सहजै स्वीकार गर्ने : यदि तपाईं धनी, सफल वा जीवनमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने अनिश्चितता वा चुनौतीको लागि पनि तयार हुनुपर्छ । धनी मानिसहरू प्रायः आफूलाई असुरक्षित अवस्थाबाटै आरामदायी स्थितिमा पुग्छन् । Source: nepalipaisa
← पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, ०१ कार्तिक २०७८ सोमवारको राशिफल पढौं
पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, ०२ कार्तिक २०७८ मंगलवारको राशिफल पढौं →
आज १९ सय ९३ जनाले जिते कोरोना (सक्रिय संक्रमित कती?)
२८ माघ २०७७, बुधबार १८:०४ Basanta Khanal	0